Ụzọ iji dozie 4014 Error na iTunes
Ụlọ ọrụ anyị enyochala ọtụtụ koodu njehie ndị ọrụ iTunes nwere ike izute, ma nke a dị anya site na njedebe. Isiokwu a ga-atụle njehie 4014. Dịka iwu, njehie na koodu 4014 na-eme n'oge usoro mgbake nke ngwa Apple site na iTunes.
Esi emeghe iPhone, iPad ma ọ bụ iPod site na iTunes
Otu n'ime ihe ndị a na-ejighị n'aka nke Apple ngwaọrụ bụ na paswọọdụ i setịpụrụ agaghị ekwe ka ndị mmadụ achọghị ozi gbasara gị, ọbụlagodi na ngwaọrụ ahụ furu efu ma ọ bụ zuo ohi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chefuru paswọọdụ site na ngwaọrụ ahụ, nchedo dị otú ahụ nwere ike iji egwu egwu jikọọ gị, nke pụtara na ọ bụ naanị iTunes ga-eji ngwaọrụ ahụ.
Ntuziaka maka ịdenye akaụntụ ID Apple site na iTunes
Maka ịzụta na Ụlọ Ahịa iTunes, Ụlọ Ahịa IBook na Ụlọ Ahịa Store, nakwa maka iji ngwaọrụ Apple, a na-eji akaụntụ pụrụ iche, nke a na-akpọ ID Apple. Taa, anyị ga-enyocha nkowa otú e si edebanye aha na Aytüns. Apple ID bụ akụkụ dị mkpa nke ohia Apple nke na-echekwa ozi niile gbasara akaụntụ gị: ịzụrụ, ndebanye aha, ndabere nke ngwaọrụ Apple, wdg.
Etu ibudata egwu site na iTunes gaa na kọmputa
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, a maara iTunes dịka ngwá ọrụ maka ijikwa ngwaọrụ Apple, dịka ngwá ọrụ dị irè iji chekwaa ọdịnaya mgbasa ozi. Karịsịa, ọ bụrụ na ịmalite ịhazi nchịkọta egwú gị na iTunes nke ọma, usoro a ga-enye aka magburu onwe ya maka ịchọta egwu nke mmasị, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-edegharị ya na ngwaọrụ ma ọ bụ na-egwu ozugbo na onye ọkpụkpọ nke usoro ihe omume ahụ.
Na usoro iji iTunes, n'ihi mmetụta nke ihe dịgasị iche iche, ndị ọrụ nwere ike ịchọta ọtụtụ njehie, nke ọ bụla na-esonyere ya koodu nke pụrụ iche. Icheta njehie 3004, n'isiokwu a, ị ga-ahụ ndụmọdụ ndị ga-enyere gị aka idozi ya.
Otu esi enye ikike kọmputa na iTunes
Ị maara na ịrụ ọrụ ngwaọrụ Apple na kọmputa na-eji iTunes eme ihe. Mana ọ bụghị ihe niile dị mfe: ka ị wee rụọ ọrụ nke ọma na data nke iPhone gị, iPod ma ọ bụ iPad na kọmpụta, ị ga-ebu ụzọ nye ikikere kọmputa gị. Ikwenye kọmputa gị ga-enye PC gị ike ịnweta data akaụntụ akaụntụ Apple gị niile.
Ụzọ iji dozie njehie 2002 na iTunes
N'oge ọrụ nke iTunes, ndị ọrụ maka ihe dịgasị iche nwere ike ịchọta mmemme mmemme. Iji ghọta ihe kpatara nsogbu nke iTunes, njehie ọ bụla nwere koodu pụrụ iche. N'isiokwu a, ntụziaka ahụ ga-eme ihe na njehie na koodu 2002. N'ịbụ onye nwere njehie na koodu 2002, onye ọrụ kwesịrị ikwu na enwere nsogbu na njikọ USB, ma ọ bụ na iTunes na-egbochi usoro ndị ọzọ na kọmputa.
Otu esi ehichapụ iPhone: ụzọ abụọ iji rụọ usoro ahụ
Na-akwadebe iPhone maka ire ere, onye ọ bụla onye ọrụ ga-eduzi usoro nrụpụta, nke ga-ewepụ ihe niile ntọala na ọdịnaya site na ngwaọrụ gị. Gụkwuo banyere esi edozi iPhone, gụọ isiokwu ahụ. Iweghachi ozi sitere na iPhone nwere ike ime n'ụzọ abụọ: iji iTunes na site na ngwaọrụ n'onwe ya.
Esi lelee akụkọ ịzụta na iTunes
Maka oge niile n'iji ngwaọrụ Apple, ndị ọrụ na-enweta nnukwu ọnụọgụ mgbasa ozi, nke enwere ike itinye na oge ọ bụla na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe na mgbe ị zụrụ ya, mgbe ahụ ị ga-achọ ịhụ akụkọ ntọala na iTunes. Ihe niile ị zụrụ na otu n'ime ụlọ ahịa Apple ga-abụ nke gị, ma ọ bụrụ na ị gaghị atụfu ohere na akaụntụ gị.
ITunes adịghị amalite: ngwọta
Na - arụ ọrụ na iTunes, ndị ọrụ nwere ike izute ọtụtụ nsogbu. Karịsịa, isiokwu a ga-atụle ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na iTunes jụ ịmepụta ma ọlị. Nsogbu ịmalite iTunes pụrụ ibili maka ihe dị iche iche. N'isiokwu a, anyị ga-agbalịa ikpuchi ọtụtụ ụzọ iji dozie nsogbu ahụ, ka ị wee nwee ike ịmepụta iTunes ozugbo.
Ụzọ maka Ndozi Njehie 0xe8000065 na iTunes
Mgbe ị na-eji iTunes, onye ọ bụla onye ọrụ nwere ike izute mberede na ọ bụ njehie, mgbe nke a gasịrị ọrụ nkịtị nke mgbasa ozi jikọtara agaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na ị zutere njehie 0xe8000065 mgbe ị jikọtara ma ọ bụ mekọrịta ngwa Apple, mgbe ahụ, n'isiokwu a, ị ga-ahụ ndụmọdụ ndị dị mkpa ga-eme ka ị kpochapụ njehie a.
Otu esi emepụta egwu egwu na iTunes
ITunes bụ usoro a na-ewu ewu na kọmputa nke onye ọrụ ọ bụla nke ngwa apụl. Ihe omume a na-enye gị ohere ịchekwa ọtụtụ nchịkọta egwu gị na n'ụzọ nkịtị na clicks abụọ dịnye ya na ngwaọrụ gị. Ma ka ị nwee ike ịfefe na ngwaọrụ ahụ abụghị ihe niile nchịkọta egwu, ma ụfọdụ nchịkọta, iTunes na-enye ike ịmepụta listi ọkpụkpọ.
Otu esi eji iTunes
ITunes bụ otu mgbasa ozi na-ewu ewu bụ onye isi ọrụ ya bụ ijikwa ngwaọrụ Apple site na kọmputa. Oge mbụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọhụrụ ọ bụla nwere ike ịnweta ụfọdụ ọrụ nke usoro ihe omume ahụ. Isiokwu a bụ onye nduzi na ụkpụrụ ndị dị mkpa nke iji iTunes, ebe ị nụchara nke, ị ga-enwe ike ịmalite iji usoro mgbasa ozi a jikọta.
Esi weghachite iPhone, iPod ma ọ bụ iPad
Ngwa Apple Apple dị iche iche na ha nwere ike ime nkwado zuru ezu nke data na ike ịchekwa ya na kọmputa ma ọ bụ n'igwe ojii. Ọ bụrụ na ịnweghachi ngwaọrụ ma ọ bụ zụrụ iPhone, iPad ma ọ bụ iPod ọhụrụ, nchekwa ndabere echekwara ga-enye gị ohere iweghachi data niile.
Otu esi tinye akwụkwọ na iBooks na iTunes
Apple smartphones na mbadamba bụ ngwaọrụ ọrụ na-enye gị ohere ịrụ ọtụtụ ọrụ. Karịsịa, ndị ọrụ dịka ndị na-agụ kọmputa na - eji ihe ndị dị otú ahụ eme ihe mgbe nile site na nke ị nwere ike ịbanye n'ime akwụkwọ ọkacha mmasị gị. Mana tupu ịmalite ịgụ akwụkwọ, ịkwesịrị itinye ha na ngwaọrụ gị.
Otu esi etinye iTunes na kọmputa gị
ITunes bụ usoro a na-ahụ maka ụwa maka usoro ijikwa ngwaọrụ Apple. Site n'usoro ihe omume a, ị nwere ike ịnyefee egwu, vidiyo, ngwa na faịlụ ndị ọzọ na mgbasa ozi na iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, chekwaa akwụkwọ ndabere ma jiri ha n'oge ọ bụla iji weghachite, tọgharịa ngwaọrụ na ala mbụ ya na ọtụtụ ndị ọzọ.
ITunes enweghị ike ijikọ na Ụlọ Ahịa iTunes: isi ihe kpatara ya
Dịka ị maara, Ụlọ Ahịa iTunes bụ ụlọ ahịa Apple, nke na-ere ihe dị iche iche nke mgbasa ozi: egwu, ihe nkiri, egwuregwu, ngwa, akwụkwọ, wdg. Ọtụtụ ndị ọrụ na-azụ ahịa na ụlọ ahịa a site na Ụlọ Ahịa iTunes. Otú ọ dị, ọchịchọ ịga ileta ụlọ ahịa agaghị enwe ike ịga nke ọma ma ọ bụrụ na iTunes enweghị ike ịbanye na Ụlọ Ahịa iTunes.
ITunes adịghị ahụ iPad: isi ihe kpatara nsogbu ahụ
N'agbanyeghị na Apple na-etinye iPad ka ọ bụrụ ngbanwe zuru ezu maka kọmputa, ngwaọrụ a ka na-adabere kpamkpam na kọmpụta ahụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe ana-ekpochi ya, ọ ga-ejikọrọ ya na iTunes. Taa, anyị ga-enyocha nsogbu ahụ mgbe, mgbe ejikọrọ na kọmputa, iTunes adịghị ahụ iPad.
Otu esi emekọrịta iPhone na iTunes
Iji nwee ike ijikwa iPhone gị site na kọmpụta, ị ga-achọ iji iTunes, bụ nke a ga-esi rụọ ọrụ mmekọrịta. Taa, anyị ga-elebakwu anya otú i nwere ike isi metụta iPhone, iPad ma ọ bụ iPod site na iji iTunes. Mmekọrịta bụ usoro na iTunes na-enye gị ohere ịnyefe ozi ma site na ngwa apụl.
Esi weghachite ụda zụrụ na iTunes
Ihe a zụrụ site na Ụlọ Ahịa iTunes na Ụlọ Ahịa Kwesịrị ịnọgide na-abụ nke gị ruo mgbe ebighị ebi, n'ezie, ọ gwụla ma ị kwụsịrị ịnweta akaụntụ Apple ID gị. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe mgbagwoju anya site na ụda a zụrụ site na Ụlọ Ahịa iTunes. A ga-atụle isiokwu a n'ụzọ zuru ezu na isiokwu ahụ. Ebe nrụọrụ anyị nwere ihe karịrị otu isiokwu na-arụ ọrụ na iTunes.